Man Down System / Solution Safety Worker Lone (Singapore)
Qalabka Nabadgalyada ee Man-hoosta - Hubso in lagugu soo wargeliyo haddii shaqaaluhu uu ku dhaco shil
iCare 3.0 - Nidaamka Man Down - Xalka Badbaadada Shaqaalaha ee Shaqaalaha
Duulista, kala-leexashada iyo dhicidda ayaa ah qaababka ugu waaweyn ee shilalka goobta shaqada ee ka dhaca dhammaan warshadaha badan. Haddii ay ka soo dhacayso meelaha dhaadheer ama birta xadhkaha goosatay, shilalka noocan oo kale ah waxay sababi karaan dhaawacyo culus, iyo xaalado aad u xun, xitaa dhimashada shaqaalaha. Ogaanshaha isla markiiba markay dhacdo sidan oo kale ahi waxay u oggolaanaysaa loo shaqeeyayaasha inay si dhakhso leh ugu yeeraan caawimaad caafimaad kana hortagaan xaaladaha xun. Tani waxay si gaar ah khusaysaa xaaladaha ay shaqaaluhu kaligood ugu shaqeeyaan jawi go'doon ah, oo aan laga fiirin. Way ku adkaan doontaa inay u yeeraan feejignaan waqtiyada ay baahan yihiin markay dhaawacmaan, sidaas darteedna, qaylo-dhaanta dadka iyo aaladaha waxay u dhaqmaan sidii xal caan ah oo loogu talagalay xaaladaha noocaas ah.
iCare 3.0 Qalab GPS Tracker wuxuu kormeeri karaa xaalada shaqaale ee waqtiga dhabta ah. Markuu dhaco, iCare 3.0 si otomaatig ah ayey u kicin kartaa feejignaanta taleefanka qof kale, si gargaarkaas isla markiiba loo bixiyo
Shaqaaluhu wuxuu sameyn karaa wicitaanno ama wuxuu u diri karaa digniinta iyo ogeysiiska kormeeraha haddii ay jirto xaalad degdeg ah.
Loogu talagalay shaqaalaha ka shaqeeya qaybaha ugu halista badan sida dhismaha, Kheyraadka dabiiciga ah, daryeelka caafimaadka, fulinta iyo gaadiidkaba, Aware 360 ​​waxay siisaa xalka amniga oo dhameystiran shaqaalaha si loo hubiyo in shaqaale kastaa uu heli karo kaalmo ama caawimaad caafimaad markii loo baahdo. Ha noqoto aaladda dayax gacmeedyada (GPS), barnaamijyada taleefannada casriga ah ama aaladaha kale ee la isku qurxin karo, waxaan hubinnaa in tikniyoolajiyadda saxda ah loo diro xaalad kasta oo u gaar ah.
Waxaa ugu wanaagsan:
- Shaqaalaha Lon
- Shaqaalaha ku sugan bay'adaha halista ah
- Shaqaalaha Fog
1. Cabbir yar, IPX7 oo biyuhu ka madhan yihiin, Dahaarka caagga, wuxuu dareemayaa raaxo.
2. Badhanka SOS ee furaha furaha.
3. Cod si deg deg ah marka qaylo dhaantu kiciso iyo xasuusinta shaqada.
5. GPS raadinta banaanka iyo BLE / WIFI dabagalka gudaha.
6. Rugta xiritaanka ayaa bixisa lacag-bixin deg deg ah oo si sahlan loo isticmaali karo.
7. U dhig alaarmiga shaqaalaha iyo shaqaalaha.
8. Qaylo-dhaanta aagga badbaadada dhulka, dhaqdhaqaaq / maqal la'aan iwm.
9. Dareenka gariirka iyo dareeraha dhaqdhaqaaqa.
10. isku xirnaanta BLE 5.0.
11. Dib-u-gelinta xogta aagga indhoolayaasha.
12. UBX farsamada GPS.
13. Xaqiijinta sare ee GPS iyo taageerada AGPS.
14. Adeegga kormeerka ee IOS / Android APP + WEB.
15. FOTA (Firmware-ka oo hawada sare lagu marinayo).
16. Miisaan yar iyo mid fudud, kaliya 1.4 oz.
Ogaanshaha Dhicida & Ogaanshaha Dhaqdhaqaaqa La'aanta
Shaqaaluhu wuxuu awood u leeyahay inuu kula xiriiro waxyaabaha ay ku jiraan daboolida badhan inta lagu jiro xaalad deg deg ah.
Ku habboon Ku-dheji / Fudud & Ficil (4 Midab)
Shabakadaha & Barnaamijyada Moobilka ee Kormeerka (Wadada taariikhiga ah / waqtiga-dhabta ah)
Codsiga Webka & taleefannada casriga ah oo leh barxad lagu raadsado ayaa la bixin doonaa. Waxaad ka hubin kartaa aaladda qalabka meesha uu ku yaal (wadada taariikhiga ah / waqtiga dhabta ah) kombiyuutarkaaga PC, Tablet ama Smartphone.
Faahfaahinta guud model GPS050D
aragti 2.4 * 1.7 * 0.6 inji / 61mm * 44mm * 16mm
Miisaanka 1.4 OZ / 40g
Beteriga dayactirka Dib loo soo celin karo, 3.7V, 850mAh
Xaqiijinta qiimaha 5V DC
Heerkulka Operating -20 ° C illaa + 80 ° C shaqada
-30 ° C illaa + 70 ° C kaydinta
nolosha Battery Ilaa 72 saacadood isticmaalka caadiga ah
hardware shidma Dhaqdhaqaaqa dhaqdhaqaaqa & gariirka
Xidhiidhiyayaasha 4 Pin-Magnet si aad u buuxiso
Kaarka SIM-ka Na-maya kaarka SIM
Xusuusta Flash 1MB
Lagu rakibay makarafoonka & sameecada
GPS Chipset GPS Ubx M8130 (Taageerada AGPS)
Taageerada GPS iyo Glonass
Qaadashada inta jeer 1575.42MHz
Bilow qabow qiyaastii 26s
Bilow diiran qiyaastii 2s
Bilow kulul qiyaastii 1s
anteeno Anteenada dhoobada lagu dhex dhisay
Nidaamka iHelp Man Down - Liiska Macaamiisha Xalka Badbaadada Shaqaalaha
Macmiilka Xalka OMG - QNET
Xalka OMG - Macmiilka - DOW
Macaamiisha Xalka OMG - SGEnable
Macmiilka Xalinta OMG - Geylang East Home ee dadka da'da ah
Macaamiisha Xalka OMG - Thermo Fisher Scientific
waxay qaadataa 250x
Xalka OMG - Macmiilka - Qalabka gaarka ah V2
Macaamiisha Xalka OMG - CGG
Macmiilka Xalka OMG - Starhub
Macmiilka Xalka OMG - M1
Macaamiisha OMG Solutions - Hawlgallada Singapore ee Medtronic Pte Ltd 03
Macmiilka Xalinta OMG - Parker
Xalka OMG - Macmiilka - GPS040D - Adeegyada Mossad
Xalka OMG - Macmiilka - Soitec 250x
Xalka OMG - Macmiilka -Biopolis 250x
Macaamiisha OMG Solutions - BioTronik APM Pte Ltd
Macaamiisha OMG Solutions - Alzheimers Association Singapore
Macaamiisha OMG Solutions - Association Autistic
Macaamiisha Xalka ee OMG -Micron Singapore
Macmiilka Xalka OMG - Lonework - AXA
18024 Wadarta Views 9 Views Maanta
Xuquuqda daabacaadda 2011, OMG Solutions Pte Ltd Developed By	OMG Solutions Pte Ltd